Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Live Lyophilized China Manufacturer
Iimveliso ezigqityiweyo zenziwe ziPhakamileyo,I-High Titer iVettenated High Potency,Ukugonywa kwe-Bioproducts
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso ezigqityiweyo zenziwe ziPhakamileyo,I-High Titer iVettenated High Potency,Ukugonywa kwe-Bioproducts
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Live Lyophilized
Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Live Lyophilized
 Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Live Lyophilized
Ukufakelwa kwamalungelo omenzi kwiinkqubo zophuhliso lokugonya kungabonwa njengeyithintelo ekuphuhliseni izitofu ezitsha. Ngenxa yobuthathaka obuthathaka olunikezwa nge-patent kwimveliso yokugqibela, ukukhuselwa kwezinto ezintsha malunga nokugonya kuthathwa rhoqo nge-patent yeenkqubo ezisetyenziselwa ukuphucula izitofu ezintsha kunye nokukhuselwa kwesifihla . 
Ngokwe-World Health Organisation, umqobo omkhulu kumveliso wokugonywa kwendawo kwiindawo ezingaphantsi kwamanye amazwe awunalo ilungelo lobunikazi, kodwa iimali ezinkulu, izibonelelo, kunye nezakhono zabasebenzi ezifunekayo ekungeneni kwemarike. Iifom zinkxubexube eziyinkimbinkimbi zezinto eziphilayo, kwaye ngokungafaniyo neziyobisi, akukho zitofu zendalo ezikhoyo. Isitofu esakhutshwa sisixhobo esitsha kufuneka sifake ukuhlolwa okupheleleyo klinikhi ukwenzela ukhuseleko kunye nokusebenza ngendlela efanayo neyo efunyenwe ngumvelisi wokuqala. Kule ninzi iigcino, iinkqubo ezithile ziye zanikwa ilungelo lobunikazi. Ezi zinokuthi zikhutshwe ngamanye amacebo okuvelisa, kodwa oku kufuna isiseko se-R & D kunye nabasebenzi abanezakhono. Kwimeko yamagciwane amancinci ambalwa njengegciwane le-papillomavirus yomntu, amalungelo omenzi angabangela ukuba kubekho umqobo ongaphezulu. 
Related Products List: Iimveliso ezigqityiweyo zenziwe ziPhakamileyo , I-High Titer iVettenated High Potency , Ukugonywa kwe-Bioproducts , Iimveliso ezigqityiweyo zeBiopharmaceutical Long , Imveliso eQinisekayo yeMpilo ePhakamileyo , Iimveliso ezigqityiweyo , Iimveliso ezigqityiweyo ezicwangcisiweyo ze-Bioproducts , Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine